SomaliaReport: Al-Shabaab oo Magacowday Hogaamiye Cusub
By MHD 01/14/2012
Al-Shabaab ayaa maanta umagacowday maamul magaalo dekadda ah ee Kismaayo kadib markii ururka fallagada ahi casilay gudoomiyaha Sheekh Xasan Yacquub iyo madaxa dacwada Sheekh Cabdinaasir.
Saraakiisha al-Shabaab ayaa shir ku qabtay xafiiskooda maamulka Kismaayo iyagoo maamul cusub umagacaabay magaalada, siduu sarkaal al-Shabaab oo codsaday inaan la magacdhabin ayaa Somalia Report usheegay galabnimadii Jimcaha.
Sarkaalka ayaa yiri, “Goordambe maanta oo ku aadan 5:00pm saraakiisha al-Shabaab oo uu hogaamiyey Sheekh Fiidow ayaa isugu yimid shir ay ku magacaabeen gudoomiyaha cusub ee magaalada Kismaayo. Gudoomiyaha cusub, Sheekh Cabduraxmaan Muudey ayaa waxaa xafiiska ku dhaariyey Sheekh Fiidow oo ku sifeeyey halyeey abaabuli kara dhallinyara inay ka qaybqaataan Jihaadka looga soo horjeedo Ciidamada Difaaca Keenya (CDK) iyo dawladda Soomaaliyeed.”
Sheekh Cabdirahmaan wuxuu kasoo jeeda beesha Gaal-Jecel oo ah qabiil ku xoogan Kismaayo, guddoomiyihii hore wuxuu kasoo jeeday Baydhabo.
Guddoomiyaha cusubi xilal kala duwan ayuu kasoo hayey maamulka al-Shabaab sida gudoomiyaha ku meelgaarka magaalada Kismaayo iyo madaxa Dacwada. Wuxuu kaloo ka mid ahaa guddiga ka hortaga abaaraha ee gobolada Gedo iyo Jubooyinka.
Guddomiyaha oo hadlay kadub markii la magacaabay ayaa sheegay inuu xooga saarayo nabadsugida iyo daryeelka bulshada.
“Maanta waxaan dadka magaaladan ka ballanqaadayaa inaan magaalada ka hirgaliyo Shariicada oo aan dadka mardanbe lagu waxyeelin magaaladan,” ayuu ballanqaaday.
Guddomiyahu wuxuu kaloo ballanqaaday inuu dagaal barakaysan ku qaadayo ciidamada Keenya, wuxuu kaloo shacabka niyadgaliyey inaan Keenya soo gaareyn Kismaayo oo ay kula dagaalamidoonaan magaalooyinka kale.
“Dagaal kama dhacayo magaaladan. Waxaan abaabulaynaa ciidamadayada kufaartana waxaan kula dagaalamaynaa magaalooyinka kale inta aysan Kismaayo nagula dagaalimin. Waxaan ognahay hadafka Keenya oo ah inay ka faa’iidaystaan khayraadkeena qalallaasana ka abuuraan wadankeena, sidaa darteed waa in dhallinyaradeenu ka dagaalamaan qorshahaan,” ayuu ku daray.
Guddoomiyaha xilka ka degay Sheekh Yaaquub, oo la sheegay inuu Baydhabo u wareegay ayaa soo dhaweeyey magaabida masuulka cusub oo ballanqaaday into taageerayo maamulka cusub.
“Waxaan ballanqaadayaa inaan la shaqeeyo maamulka cusub oo aan aaminsanahay inuu sii wadayo shaqada wanaagsan ee aan bilaabay markii lay magacaabay guddoomiyaha magaaladan. Maanta waxaan ballanqaadayaa in maamulku uwanaagsanayo dadka magaalada,” ayuu yiri.